Horonantsary BlueLock: Cloud Computing | Martech Zone
Horonantsary BlueLock: Cloud Computing
Alakamisy Oktobra Oktobra 9, 2008 Alahady, Novambra 3, 2013 Douglas Karr
Resadresaka mahafinaritra ary famaritana tsotra momba ny computing cloud on WishTV miaraka amin'ny namako, Brian Wolff, ao BlueLock.
Teknolojia mahavariana izay, mino aho fa hanakona ny Internet rehetra amin'ny farany. Raha te-hamaky boky mahafinaritra momba ny hoavin'ny fikirakirana rahona ianao, azafady Nicholas Carr's The Big Switch.
Ny torolàlana momba ny zana-kazo fivarotana mailaka 2009
Generator Favicon: Fa maninona no tsy manana Favicon?
9 Okt 2008 amin'ny 9:15 PM
Tiako ny Big Switch. Tena nanome ahy fomba fijery hafa tanteraka amin'ny informatika sy ny aterineto izany. Rehefa mivoatra ny teknolojia, dia misy dikany ho an'ny orinasa amin'ny habe rehetra ny fifindra-monina mankany amin'ny tontolo Cloud Computing.
Ary nanao asa tsara tokoa i Brian tamin'ny fanazavana tamin'ity video ity!